आजदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी ! के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने? जान्नुहाेस् – PathivaraOnline
Home > समाचार > आजदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी ! के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने? जान्नुहाेस्
उपत्यका प्रशासनले चौथो पटक निषेधाज्ञा थप्ने वा नथप्ने भन्ने विषयमा छलफल थालेको छ । मंगलबार दिउँसो साढे २ बजे काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुबीच भर्चुअल संवाद हुँदैछ । कोरोना सं’क्रमण बढेपछि तीनवटै जिल्लाले भदौ ४ गतेदेखि नि’षेधाज्ञा लगाएका छन् । तेस्रो पटक थपिएको निषेधाज्ञाको समय बुधबार मध्यराति सकिँदैछ । तर अझै संक्रमण नियन्त्रणमा नआएकाले पूर्ण रुपमा खुला गर्न नहुने भन्ने छ ।
तर राजधानीका तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकमत छन् । हालकै अवस्थामा निरन्तरता दिँदा पनि जनस्तरबाट विरोध हुनसक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।गृह मन्त्रालयले पनि निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो बनाउने गरी खाका प्रस्तुत गर्न भनेको छ ।
मंगलबारको संवादपछि निस्किने निष्कर्षबारे गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलगायतसँग छ’लफल गरेर उपत्यकाको निषेधाज्ञाबारे निर्णय हुने स्रोतको भनाइ छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने, ‘हामी छलफलमा छौं, बुधबार मात्र निषेधाज्ञाबारे निर्णय हुनेछ ।’
मोरङको बेलबारीमा गाईले मान्छेजस्तो बाछो जन्माएपछि हेर्नेको भिड ( तस्विर सहित )
नेपालगंजमा फेरि यति धेरै थपिए कोरोना संक्रमित
भर्खरै आयो ३३ किलो सुन काण्डको यस्तो खबर